Ny 'O' dia nanjavona nandritra ny ora maro nanomboka tamin'ny marika Oreo ka nahagaga ny rehetra | Famoronana an-tserasera
Ny 'O' dia nanjavona tamin'ny marika Oreo ka nahagaga ny rehetra
La marika biscuit dia fantatra eran'izao tontolo izao noho io sôkôla io ary io menaka palmie io, nesorinao ny litera 'O' tamin'ny famolavolana logo anao. Izany hoe, nivadika azy ho toerana tsy misy dikany izay ahafahan'ny saintsika misintona ny 'O' toy ny hoe teo izy.
Oreo io namoaka ny sarin'ny logo azy tao amin'ny Facebook, saingy tsy misy ny litera 'O' ka gaga ny rehetra.Fa inona no antony? Satria ny zava-drehetra dia misy antony manosika ary mifandraika amin'ny Vokovoko Mena ary fanoloran-tena lehibe noho ny fanentanana.
Ny fanjavonan'ilay taratasy 'O' avy amin'ny marika Oreo dia vokatry ny fandraisana andraikitra iray izay nandraisan'ny Vokovoko Mena anjara hamporisihana izay rehetra handray anjara amin'ny Andro manerantany ho an'ny mpanome ra.
Tsy hita ny an'ny O antsika! Ampio izahay hameno azy ireo #WorldBloodDonorDay amin'ny alàlan'ny fanindriana ny rohy sy fisoratana anarana miaraka amin'ny Vokovoko Mena Amerikanina hanome ny O, A ary B anao. #MissingTypes https://t.co/56DRujTVxf pic.twitter.com/s9LT3kZmzI
- OREO Cookie (@Oreo) Jona 14, 2019
Rehefa nandeha ny andro, ny cookie Oreo dia nameno an'io crème io izay nahatonga ny marika malaza be. Farany dia naverina tamin'ny tranokalany ireo 'O' roa ary mitohy hatrany ny zava-drehetra miaraka amin'ity marika ity izay nitady tamin'ny sary famantarana azy ny fiatraikany ilaina mba hisarihana ny sain'ny maro amin'ny Twitter sy ireo tambajotra sosialy hafa toa ny Facebook.
Izany rehetra izany dia misy ifandraisany amin'ny karazana ra hanome. Tsy hoe 'O' izany, fa mety ho 0 miiba na 0 tsara. Ary eo no nilalao ny Oreo manomeza fivarotana marketing tsara ary miantso ny sain'izay rehetra afaka mandray anjara amin'ny taratasy Vokovoko Mena ho an'io andro miavaka io.
Izany no Rafitra vondrona ra ABO, noho izany ny Vokovoko Mena dia naneho hevitra tamin'ny alàlan'ny firesahana amin'ireo orinasa rehetra afaka manaisotra ireo taratasy ireo tamin'ny sary famantarana azy ireo nandritra io andro manokana io. Miresaka momba an'i Amazon, Adobe sy ny maro hafa izahay; eny tokoa, tsy ho ela dia hanana ianao Adobe Fresco ho fampiharana sary vaovao ho an'ny findainao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ny 'O' dia nanjavona tamin'ny marika Oreo ka nahagaga ny rehetra
Wacom dia nanambara ny Bamboo Ink Plus mba hahafahanao manadino ny bateria
Nilaza i Elon Musk fa manimba ilay mpanelanelana ny fanomezana voninahitra ireo mpanakanto ao amin'ny Twitter